FAHALEOVANA UK - UKI | Solar Solve Marine
FAHALEOVANA UK - UKI
Ny fifampiraharahana ara-barotra vaovao eo amin'ny UK sy ny EU dia nanomboka ny 1 Janoary 2021.
Satria ny Solar Solve Limited dia nanondrana ny vokatra hatrany amin'izao tontolo izao ary nifanakalo varotra amina firenena sy faritany 113 manerantany, amin'ny kontinanta 7 rehetra nanomboka ny 1987, anatiny sy ivelan'ny EU, antenaina fa hisy fiatraikany kely amin'ny fiovantsika manodina sy manondrana ny vokatray nanomboka tamin'io daty io.
Nandritra izay telo taona lasa izay dia nandefasana ny entana rehetra, na vonona ny hanangona ireo mpanjifa mpanjifa, tamin'ny datin'ny fandefasana.
Misy antony maromaro mahatonga ny fifanarahana fifampiraharahana vaovao nifanaovan'ny UK sy ny EU, vokatry ny fahaleovantenan'i Angletera, tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny serivisy miavaka amin'ny mpanjifa Solar Solve sy ireo mpanjifa mety ho nahazo tombontsoa nandritra ny am-polotaona maro. Izy ireo dia: -
Ny karazana vokatra izay amboarinay sy omenay dia hitohy hamidy amin'ny lalàna EU ankehitriny.
Solar Solve dia efa mpanondrana eran-tany ary mahafantatra tsara ny fomba fanaovan-tsoratry ny EU sy WTO.
Solar Solve dia tsy mampiasa afa-tsy ireo mpitatitra tsara indrindra sy azo itokisana, hahazoana antoka fa ampitaina amin'ny fomba mandaitra, mahomby ary tonga ara-potoana, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ny baiko.
Ny tranokala famokarana Solar Solve Limited any South Shields, dia mitazona tahiry sy singa mitahiry herintaona, mba hanombohana ny famoahana ny baiko ho an'ny isan'ny vokatra raha vantany vao voaray ny baiko.
Izay rehetra manana ahiahy amin'ny lafiny rehetra amin'ny serivisy omenay, dia afaka mifandray amin'ireo varotra, marketing ary mpanolotsaina teknika mahay be. Izy ireo dia hajaina erak'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny olona tompoinay ary ny mpanontany dia mahazo antoka ny fahafaham-po tanteraka